Izitshalo ezihlanza umoya: izinhlobo ezihamba phambili | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 13/04/2022 12:00 | Ikhaya Eliluhlaza
Umoya ezindlini zethu nasezindaweni zokusebenza uya ngokuba mubi kakhulu. Indlela yethu yokuphila eholele enanini elandayo lemikhiqizo eyenziwe ngamakhemikhali ezindlini zethu ekhulula ukugxiliswa kwezinhlanganisela zezinto eziphilayo eziguquguqukayo eziyingozi empilweni. Okuvame kakhulu yilezi: i-formaldehyde, i-trichlorethylene, i-benzene, i-xylene, i-toluene, i-carbon dioxide ne-ammonia, ezinye zazo ezinemiphumela efakazelwe ye-carcinogenic. Ukuze ubhekane nalesi simo, kunezinhlobonhlobo izitshalo ezihlanza umoya.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izitshalo eziyinhloko ezihlanza umoya nokuthi zingakuzuzisa kanjani.
1 Izinzuzo zezitshalo ezihlanza umoya
2 izitshalo ezihlanza umoya
2.2 i-areca palm
2.3 ulimi lwengwe
2.5 Ibhande lekhanda
2.7 isihlahla sesundu samaShayina
2.8 Isiqu seBrazil
2.9 IsiNgisi ivy
3 Umuthi wesundu woqalo
Izinzuzo zezitshalo ezihlanza umoya
Izitshalo zinezinzuzo eziningi ekhaya. Ngaphezu kokusebenza njengama-air fresheners kwezinye izimo, nabo banciphisa umsindo, bathuthukise isimo sengqondo futhi bahlanze imvelo. Khumbula ukuthi ngesikhathi se-photosynthesis, izitshalo zithatha isikhutha endaweni ezungezile bese ziyiguqula ibe umoya-mpilo, odingekayo ukuze umuntu aphefumule.
Ezinye zazo ziwusizo kakhulu kunezinye uma kuziwa ekuhlanzeni indawo ezungezile nokuhlunga ukungcola. I-NASA yenza ucwaningo lwesayensi ngasekupheleni kwawo-1980, i-NASA Clean Air Study, ukuthola ukuthi yiziphi ezazisebenza kahle kakhulu kulokhu. Abacwaningi bakwenza lokho uhlu lwezitshalo zokuhlanza ezingu-20 eziwusizo ikakhulukazi ekuhlanzeni umoya ezindaweni ezivaliwe.
Umbhali oholayo walolu cwaningo, uBill Wolverton, ungusosayensi waseMelika ogxile kwezamakhemikhali, i-microbiology, i-biochemistry, kanye nobunjiniyela bezemvelo. Unqume ukuthi ezinhlanu zalezi zitshalo zazingcono kakhulu ukuba zitholakale futhi zisebenze kahle. Uhlu oluchazwe u-Wolverton emithonjeni yezindaba ehlukene lusasebenza futhi kuyathakazelisa, lezi zitshalo zingasusa izinto eziyingozi emoyeni njenge-formaldehyde, benzene, chili, carbon monoxide noma i-trichloroethyl.
Ingenye yezitshalo ezihlanza kakhulu futhi ingenye elula kakhulu ukuyinakekela. Ukubeka lesi sitshalo ekhaya lethu kunciphisa izinhlanganisela eziphilayo eziguquguqukayo ezifana ne-formaldehyde, i-xylene ne-toluene, okuyinto ziyingozi empilweni, futhi ziyasebenza nasekususeni i-acetone, i-trichlorethylene ne-benzene.
Izalelwa emahlathini ashisayo eMelika Ephakathi naseNingizimu, idinga indawo enokukhanya okungaqondile, futhi nakuba ithanda umswakama, ayiphuzi, futhi indlu yokugezela enokukhanya kwemvelo iyindawo ekahle yalesi sitshalo.
Esinye sezitshalo ezinhle kakhulu zokuhlanza umoya ngokujwayelekile. Kwaziwa ngokusetshenziswa kwangaphakathi. Lesi sihlahla sesundu sibonakala kalula emihlobiso yama-Victorian nasemafilimini enkathi. Isizathu siwukuthi iphila kamnandi endlini ngaphandle kwesidingo sokukhanya kwelanga okuqondile. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukunakekelwa okuncane kakhulu okudingekayo ukuze uyigcine isesimweni esiphezulu. Lesi sihlahla sesundu sidabuka eMadagascar. Kodwa namuhla isemhlabeni wonke. I-Las Palmas igxile ekukhipheni i-formaldehyde, benzene, ne-carbon monoxide (iwusizo ikakhulukazi uma othile ekhaya lakho ebhema).
Isetshenziselwa ukumunca i-nitrogen oxides ne-formaldehyde. Ingenye yezitshalo zasendlini ezimelana kakhulu ezikhona. Kwaziwa njengokungabhubhi. Imelane nendawo eshisayo neyomile yekamelo, ukukhanya okulufifi, ukuchelela ngokunganakwa, iminyaka ngaphandle kokutshala kabusha, izinambuzane nezifo, cishe noma yini.
Yiyona elula ukuyinakekela. Inamaqabunga asagolide amise okwenhliziyo futhi idumile eNyakatho Melika. Kuyisitshalo esiqinile ingaphila ekukhanyeni okuphansi nasemazingeni okushisa apholile, okuyenza ilungele amahhovisi nemizi njengoba ikhiphela i-carbon monoxide ne-formaldehyde emoyeni. Iqinile futhi ikhula ngokushesha. Ekhaya, ikhetha ukukhanya okungaqondile okukhanyayo kanye nenhlabathi emanzi. Perfect for yokugezela noma ekhishini.
Iqeda i-carbon monoxide nobunye ubuthi nokungcola. Ingenye yezitshalo ezintathu eziphezulu zokususa i-formaldehyde emoyeni. Kulula ukunakekela futhi izinga lokushisa elifanele, ukuchelela nokukhanya, izitshalo zakho zizophila iminyaka eminingi.
Ibekezelela ukukhanya okuphansi nokubanda kahle. Zimelana nesomiso futhi ngeke zife uma zilibele ukuchelela ngoba zigcina amanzi ezimpandeni zazo.
Iwuhlobo oluhlala luluhlaza lohlobo lweFicus oludabuka enyakatho-mpumalanga yeNdiya (Assam), eningizimu ye-Indonesia (iSumatra neJava). Yaziswa eYurophu ngo-1815 njengesitshalo sasendlini. Enye elula ukuyinakekela. Ukufaka lesi sitshalo ekhaya lethu kunciphisa i-formaldehyde, isakhi esishintshashintshayo sezinto eziphilayo esiyingozi empilweni.
isihlahla sesundu samaShayina
I-Raphis excelsa isundu esinebhodwe elihle okulula ukusinakekela futhi asidingi ukukhanya okuningi. I-Raphis excelsa, eyaziwa nangokuthi i-Chinese golden needle grass, Inenqwaba yezinhlobonhlobo ezinobude obuyimitha nesigamu. Yehlisa i-formaldehyde ne-benzene, izinhlanganisela zezinto eziphilayo eziguquguqukayo eziyingozi empilweni.
Igama layo lesayensi yiDracaena futhi ingeyomndeni we-agave. Ivela endaweni eshisayo yaseMelika futhi iyisihlahla esihlala siluhlaza. Ibonakala ngesiqu esinsundu ngokukhanyayo esiqukethe amasongo avundlile. Amaqabunga ayalenga, amise okwezinsini, futhi agqama ngombala wawo oluhlaza ogqamile kanye nemigqa ephuzi edlula kuwo.
Lezi zimbali zihluma kuphela kuma-specimens amadala afinyelela ubude obuthile (imvamisa amamitha amabili) futhi agqame ngenxa yephunga lawo elidakayo. Ivamise ukuqhakaza njalo futhi inciphise izakhi eziphilayo ezishintshashintshayo njenge-trichlorethylene ne-xylene, eziyingozi empilweni.
Kuyisitshalo esivamile sokukhuphuka esingakhuphuka amamitha ambalwa ngaphezu komhlabathi futhi singakhuphuka cishe noma yiluphi uhlobo lwendawo, njengezihlahla, amadwala, izindonga. Ukuqoqwa kwamaqabunga neziqu kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, nakuba kungcono ukukwenza ngaphambi kokuqhakaza. Yehlisa izinhlanganisela eziphilayo eziguquguqukayo eziyingozi empilweni, njenge-formaldehyde, i-trichlorethylene ne-benzene. Lo mvini unzima kakhulu ukuwukhulisa, uthanda ukubanda kanye nomswakama, futhi ungagcinwa ezimbizeni ezikuvulandi.
Umuthi wesundu woqalo
Isebenza njenge-humidifier yemvelo. Kuyisitshalo esidabuka eChina futhi silinywe emhlabeni wonke. Njengamanje ingasetshenziswa njengengxenye yokuhlobisa izindlu, izingadi nama-patio. Ngenxa yezici zayo eziyingqayizivele, isitshalo esidinga ukunakekelwa okuncane.
Isusa i-benzene, i-formaldehyde ne-trichlorethylene. Lesi sitshalo sasendlini esidume kakhulu sikhula kahle ngaphansi kwezimo eziphansi zokukhanya futhi asidingi ukuchelelwa kakhulu, okwenza siphelele kulabo abavame ukukhohlwa ukunisela izitshalo zabo.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezitshalo ezihlanza umoya kanye nezinzuzo zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ukonga amandla » Ikhaya Eliluhlaza » izitshalo ezihlanza umoya